„Unyaka wokuqala we“ žurnalistika abafundi bafunda malunga ne-Ws ezintlanu (Ngubani, Yiyiphi, Uphi, nini na nini).
Nangona usenokuba awunanjongo yokuba yintatheli yobungcali, ukuba uya bhala okokuqala, amanqaku amanqaku eblogi yakho, ngoko usebenzisa i-Five Ws ngumkhwa wokungena.
Į yokugqibela oyifunayo ukuba umfundi ayenze kukuhamba kude nebhlog yakho emva kokuqala entloko kwaye ezibuza ukuba kutheni ungasigubungelanga kwaphela isihloko.
Nangona i-Five Ws ingaba yinto encinane ukusuka kumgangatho we-publicistika, yindawo enhle ukuqala. Ngaba onke amanqaku akho abhalayo uza kuboleka abahlanu? Akunokwenzeka. Nangona kunjalo, ukugqitha kubo kungakhokelela kwenye imbono kwenye i-engile ebalini ongakhange ucinge ngayo ekuqaleni.
0.1 „Ukwaphula i-W“
6 Kuthiwani Ngendlela?
7 Isifundo seNkundla
7.1 Udliwano-ndlebe noMnu. Didelis blogas vilkas
„KwiDyunivesithi yakudala yaseDomininion inikeza isati eyanceda kakhulu xa uhamba kwii-Five Ws onokufumana uncedo“. Nacių ezinye iimbuzo ongazibuza xa uhamba nganye kwindawo.
Ngubani: Ngubani na eli bali? Ngubani na umfundi ojoliswe kuyo?
Intoni: Iyiphi imbono ephambili yebali? Kuqhubekani? Ziziphi izenzo ezichazwe ngasentla afa?
Phi: Liphi ibali elikuyo? Uphi na umntu? Senzeke phi isiganeko? Lungasetyenziswa phi ulwazi?
Nini: Yonke le nto yenzeke nini? Le ngcaciso ingasetyenziswa nini? Kuya kwenzeka nini umcimbi okanye kwenzeke ntoni?
Ngoba: Kutheni ubhala ngale sihloko? Kutheni kutheni umfundi makanyamekele?
Ukuba ubuya kuphendula umbuzo ngamnye obuzwe ngasentla, ngekhe wenze inqaku elide, akunjalo?
Enyanisweni, usenokukwazi ukuphendula yonke imibuzo kwisigwebo esisodwa. Endaweni yoko, kufuneka ukhulise kwinqanaba ngalinye, uligubungele kuzo zonke ii-angles. Ufuna umfundi ukuba ahambe awayenokuziva ngathi uyazi kakuhle isihloko kwaye kungekhona ukuba unemibuzo efuna ukuphendulwa.
Xa uphendula umbuzo wokuba ngubani lo msebenzi ungaphezulu, uyakufuna ukumba nzulu kwaye ugubungele imibuzo efana nale:
Uneminyaka engagekanani umntu?
Uhlala phi lo mntu?
Naga zikhona na iinkcukacha zobuqu eziphathelele ibali?
Ngubani obandakanyekayo kweso siganeko?
Uyintoni umsebenzi womntu?
Ngubani igama lakhe?
Iyini isihloko sakhe somsebenzi?
Iyiphi imbono ephambili yale bali? Ukuba ubuya kundixelela kwisigwebo esisodwa ukuba yintoni inqaku lakho, ungathini? Ungu:
Ukuchaza indlela yokwenza į?
Ukuphonononga okanye ukugxeka okuthile?
Laliphi na ibali apho okanye kwenzeka khona?
Bula afa. kuba ugubungela indawo, uya kufuna ukuya kwiinkcukacha ezininzi kangangoko unakho. Mbonise umfundi endaweni yokuba umxelele nje. Umzekelo, endaweni yokubhala ukuba yayilusuku olushushu, bhala ukuba iinwele zomntu žinomathele ngasemva kwentamo yakhe ukusuka ekubutyeni kuyehla ezantsi enkalweni yakhe. Umfundi makazi ukuba umoya wawushushu kwaye unamathele. Ukuba unokubonisa umfundi, uya kumsa kwinqaku lakho kwaye umgcine apho.
Yintoni ibonakala ngathi indawo?
Ingaba kukho ivumba?
Naga kukho naziphi na iinkcukacha ezincinci ukuba umfundi uya kufumana umdla ngale ndawo?
Ibali lenzeke nini okanye nini isiganeko senzeke?
Ngokusoloko kuninzi, ndibona inqaku elithile malunga nenkomfa ezayo okanye isiganeko kwaye kungekho kanye kwinqaku le ncwadi ibhekisela kumhla okanye ixesha. Naka ingqalelo kule nkcukacha kwaye izithuba zakho zeblogi ziza kuvela njengezicatshulwa eziqinileyo zokubhala.
Yintoni eyenzeka malunga Nexesha elifanayo? Ngaba lixesha elithile? Ingaba ingaba ilungileyo kulo mcimbi ngelo xesha?
Kutheni uhlanganisa le sihloko?
Ngelixa ungangaphumi ngokuchanekileyo kwaye uxelele umfundi isizathu sokuba ubhale inqaku, kubalulekile ukwazi izizathu zakho zokubhala malunga nesihloko. Unokufuna nokubuza ukuba kutheni umntu othile enze į etiile. Ngelixa awukwazi ukuhlala ngaphakathi kwentloko yomnye umntu, unokujonga izizathu zento eyenziwa ngumntu. Qiniseka nje ukuba uxela umfundi olu luhlalutyo lwakho. Eli inokuba lituba eliklis lokuba abafundi maudytis malunga nezikhundla zakho.
Ezinye iintatheli zenza umbuzo othi "njani?"
Le ngqungquthela ebizwa ngokuba yi-Five Ws kunye ne-H, okanye Ngubani na, phi na nini na?
Jei jūs njani kuyo yonke eminye imibuzo. Umzekelo, masithi uqhuba iwebhusayithi malunga nekhonsathi eza kwidolophu yakho. „Udliwanondlebe nomntu obonisa iincwadi malunga nekhonsathi ezayo“. Unokubuza ukuba uqala nini na ukuboniswa njengenxalenye yemibuzo yakho xa ubuya kwaye ulandele:
"Kuze kube nini umboniso?"
Lo ngumbuzo obalulekileyo undeda ukuzalisa izikhalazo. Kufuneka kuphethwe yendalo kunye nokuphuma kweendlebe. Inokuthi isetyenziswe njani ukunceda ukucacisa iinkqubo ezinzima kumfundi.
Makhe sijonge ibali lobudala obudala elaziwa ngabantu abaninzi ukuze ukwazi ukubona ukuba zisebenza kanjani ii-Ws ezintlanu.
Siza kujonga ibali lika Į yokuqabela encinci. Kwimeko apho ungakhange uve eli bali, ngokuyintloko lithetha ngentombazana eselula egogo. Uhamba ehlathini esiya kubona ugogo wakhe. „Intombazana encinci inxibe i-cape ebomvu ekhwele hge-hood“.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba afl endlwini kaMakhulu, ingcuka enkulu embi iyabonakala kwaye ithawo yomakhulu wakhe. Iyintoni injongo jachė? Ukutya ubomvu, okanye ibali lokuqala liya.
Kodwa, lithini icala lengcuka?
Ke, masithi ubhala inqaku kwaye udlan ‘iindlebe nengcuka. Phambi kokuba uqalise udliwanondlebe, uza kubuza ii-Ws ezintlanu ukuze zikuncede ulungiselele.
Ngubani ngeli bali? Ngubani impisi? Ngubani omkhulu? Ngubani Olubomvu?
Intoni kwenzeka ntoni kumakhulu? Iyintoni impisi? Yintoni iRed Red?
afo ibali le nzekayo? Uphi impisi xa iRubhuli ifika? Uthi umkhulu wahamba phi?
Nini ubomvu ufika endlini kagogo wakhe? Yafika nini ingcuka? Wagula nini uMakhulu?
Ngoba Ngaba ingcuka ifuna ukutya ubomvu? Kutheni umakhulu evumela ingcuka ingene? Kutheni le nto uRed activyiboni ukuba yingcuka hayi utat’omkhulu?
Udliwano-ndlebe noMnu. Didelis blogas vilkas
Ngoku, ulungele ukudliwano kwindoda. Njengoko uhamba ngemibuzo engentla, unokuza kunye nokuthatha entsha ityala. Į „efana nale“:
Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo noMnumzana Big Bad Wolf, kwafunyaniswa ukuba kukho okungakumbi kwibali leHood Red Riding Hood kunangaphambili. Ngentwasahlobo ye1659, ingcuka yatsho ukuba uBomvu nabanye babahlobo bakhe baqala umlilo wehlathi okoko kwabangela ukuba usapho lwakhe lusabe kumhadi wabo okhuselekileyo. Kule nkqubo, umfazi ka Mnumzana Wolf kunye nabantwana abathathu babulawa.
"Yayingelo xesha lokuqala ukuba iRed kunye nabahlobo bakhe be-hoodlum basibangela inkathazo kuthi kwizilwanyana zasehlathini, kodwa isenzo sakhe ngaloo mini sasifana nokubulala. Ndifungile ukuba ndiza kuziphindezela. “
Nangona kunjalo, kwakungekho kude kube sekuweni kwe1960, xa umakhulu kaRed wayegula ukuba Mnumzana uWolf wabona ithuba lakhe lokuziphindezela kwiintsapho zakhe. Ngokuka-Mnu. Vilkas, wayesazi ukuba u-Red wayethanda ukuthatha indlela ethile ehlathini esiya endlwini kagogo wakhe. Wayeyibukele iinyanga ezintandathu ngaphambi kosuku lokuhlaselwa. Wayesazi ukuba uza kuba nebhasikithi yeempahla ezibhakiweyo nalapho ahlala khona umakhulu wakhe.
Xa wabona kubomvu kwindlela yakhe eqhelekileyo esiya kugogo, wathatha indlela emfutshane enqumla kwihlathi. Umakhulu wayezithanda izilwanyana zasendle kwaye ngovuyo wayivulela umnyango wengcuka, kodwa wakhawuleza wambopha, weba omnye wabamelwane bakhe neziqhobosho wazibeka phantsi kwebhedi yakhe. Wayesazi ukuba ebengenakufihla umsila wakhe, kodwa wayenethemba lokuba uRed ngeke ayiqaphele ukuba kwakude kudala.
„Ndilinde malunga nemizuzu elishumi ngaphambi kokuba afike kwaye ndamxelela ukuba asondele kancinci ukuze ndimbone ngcono, kuba ndiyazi ukuba umakhulu wakhe akaboni kakuhle. Wonke umntu kusapho lakwaRed wenza njalo. “
Xa uRomvu esondela ebhedini, waqonda ukuba ingcuka ibingenguye umakhulu wakhe. Uvele wakhwaza wabiza umninawa awambona ukuba usendleni wangena kwaye wagotha ​​ingcuka yemka.
‘Andizukumenzakalisa’, utshilo uMnu Vilkas. „Ndizoyikisa nje kwaye ndiziba izinto azenzayo ukuze abuyele kuye kancinane. Ndiyathetha, andinguye monstras. Ndiyazi ukuba ungumntwana nje omncinci, kodwa bendifuna ukuziphindezela. “
Ingcuka ichitha iminyaka emihlanu izitshixa izama ukuzihlwitha ekuphathweni impatho yomfazi osalupheleyo.
Ngaba ubona ukuba ukubuza imibuzo kukunceda njani ibali ibali lakho kunye ba ndakanye umfundi? Ngelixa ungayisebenzisi yonke imibuzo YONYAKA naujovės, ukuba nabo apho njengesikhokelo kunokukunceda, ngakumbi xa uxoxisana nabantu.
„EduPlace“ yra populiarus esinobunokushicilela kwaye uyisebenzise ngokucwangcisa imibuzo yakho ngaphambi kokubhala ibhokisi yeposi.
Ekugqibeleni, gcinani engqondweni ukuba umfanekiso ufanelekile ngamawaka ayiwaka.
Ingakanani ibali elingaphezulu xa lithe wongeza umfanekiso kaMnu Wolf kunye nomfazi wakhe kunye nabantwana abafa ngoku?
Jonga i kampo nganye, jonga kwi-W nganye, nangaphambi kokuba uyazi ukuba uya kubhloga njengentatheli yobungcali.